Kulokoza inhlansi yethemba kuleli ngeNkantolo Yezomhlaba ehlongozwayo - Bayede News
Kulokoza inhlansi yethemba kuleli ngeNkantolo Yezomhlaba ehlongozwayo
Izinhlangano zilusukumele olokufa kwentatheli uKhashoggi
Ingase iphenduleke imithandazo yeminyaka yaboHlanga eNingizimu Afrika njengoba uNgqongqoshe Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa KoMthethosisekelo uRonald Lamola eveze ukuthi iNkantolo Yezicelo Zokubuyiselwa Umhlaba (Land Claims Court) izoguqulwa ibe yiNkantolo Yezomhlaba ethatha izinqumo kuzona zonke izindaba ezithinta umhlaba kungabi ngezimayelana nokubuyiswa komhlaba kuphela.
Uthe izophinde ibe Neyokwedluliswa Kwamacala enamandla alinganayo naweNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala.
Lokhu kwenzeka nje, ngeledlule iKhabhinethi igunyaze uMthethosivivinywa, iSichibiyelo Somthethosivivinywa Wenkantolo Yomhlaba (Land Court Bill Amendment), ukuba wethulwe ePhalamende ukuze uphasiswe.
UNgqongqoshe uLamola uthe uMthethosivivinywa Wenkantolo Yomhlaba (Land Court Bill) uzoqinisekisa ukuthi ezobulungiswa ziyibuka ngokuphelele eyezicelo zokubuyiselwa komhlaba.
Ngalokhu uthe, sekuzokwazi ukuthi kufinyelelwe ezivumelwaneni zomhlaba ezingcono, kwehlise inkohlakalo kuphinde kunqande ukuhlanganiswa kwezicelo okuholela ekungqubuzaneni.
Uthe ukusebenza kahle kwemigomo nezinhlelo okuphakanyiswe kulo Mthethosivivinywa kuzosiza ukwakha uhlaka lwezomthetho oluzobheka ezithinta umhlaba kuleli.
UNgqongqoshe uLamola uqhuba athi: “UMthethosivivinywa uzophinde ufune izindlela zokubheka izingqinamba ezenza kube lukhuni kubantu abafake izicelo zokubuyiselwa umhlaba ukuba bawuthole. Isibonelo, uMthethosivivinywa uyabamukela ubufakazi obuyinzwabethi obethulwa imindeni eminingi eyethembele emlandweni oyixoxelwayo nokubakhona kwabadala abakwazi ukuwuchaza, ukuwuhlonza nobubanzi bomhlaba owawungamanxiwa abo.”
Uthe uMthethosivivinywa futhi uyabamukela ubufakazi bochwepheshe mayelana namaqiniso ngomlando nemvelaphi yabantu okuhambisana nesicelo sokubuyiselwa umhlaba.
“Lo Mthethosivivinywa uhambisana nomthwalo obekwe emahlombe obuholi bukaHulumeni okhona ukuthi kuqinisekiswe ukuthi indlela esisingatha ngayo uguquko kwezomhlaba yakheke phezu kwezinto ezintathu okuwukuqinisa ukuvikelwa kobunikazi bomhlaba, ukubuyiswa nokwabikwa kabusha komhlaba. Lo Mthethosivivinywa uwukungenelela okuyikho okuthuthukisa ukusebenza kwazo zontathu izigaba oguqukweni kwezomhlaba,” kusho uNgqongqoshe uLamola.
Uthe ngaphezulu kwalokho, wakha uhlaka lwenqubomgomo ukuqinisekisa ukuthi uguquko kwezomhlaba lulawulwa ezomthetho eziqinile nemigomo yezomnotho futhi lufaka isandla ezinjongweni zezwe zotshalomali nemizamo yokwakha amathuba omsebenzi.
Lo Mthethosivivinywa uwumphumela womsebenzi owenziwe ikomiti elihlanganisa ongqongqoshe i-Inter-Ministerial Committee (IMC) ebelibheka izinguquko kwezomhlaba eliholwa iSekela likaMengameli uDavid Mabuza.
Leli komiti belinikwe umsebenzi wokwenza ukuba zisebenze izincomo zePhaneli Yabeluleki BakaMengameli (Presidential Advisory Panel) ebheke izinguquko kwezomhlaba nezolimo.
Iphaneli yancoma lokhu okulandelayo:
-INkantolo Yezicelo Zokubuyiswa Komhlaba (Land Claims Court) ifakwe eNkantolo Yezomhlaba entsha ukuthatha izinqumo kuzo zonke ezithinta umhlaba kungabi ukubuyiswa kwawo kuphela.
-INkantolo kumele inikwe imisebenzi ethe xaxa, wezobulungiswa neminye imisebenzi efana nendlela yokusombulula izingxabano nokuxazulula.
-INkantolo kumele ibe nendlela yokusebenza egxile ekuxoxisaneni ngaphambi kokuba kuyiwe ezinkantolo ezindabeni ezithinta ukubuyiswa komhlaba ngaphandle kwenkokhelo okuyisincomo sePhalamende kuMthethosivivinywa Sokuthathwa Komhlaba (Expropriation Bill).
-Iphaneli income kuthi iNkantolo Yezomhlaba iqoke umengameli wabehluleli nabehluleli abane abazosebenza kuyona ngokugcwele.
-INkantolo kuyolindeleka ukuthi icubungule izivumelwano inike isinxephezelo esifanele kubanikazi bomhlaba ngokuhambisana neSigaba 25 noMthetho Wokuthathwa Komhlaba (Expropriation Act) omusha uma usushayiwe.
UNgqongqoshe uLamola uthe i-IMC izamukele izincomo zephaneli futhi izifakile kuMthethosivivinywa.
Ukuxazulula ezithinta umhlaba
UNgqongqoshe Wezolimo, Ezomhlaba Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya kuleli uNkk uThoko Didiza uthe ukwandiswa kosizo lwemali nomsebenzi onikwe iBhodi Elisiza Kwezomthetho (Legal Aid Board) ukuxazulula izingxabano ezithinta umhlaba, kuzoqinisekisa ukuxazululwa ngokushesha kwezingxabano ngokuthi kusetshenziswe abaxazululi.
Uthe nakuba kuhloswe ukuthi kuthathwe imali kuLand Rights Management Facility ukuqinisekisa ukuthi iBhodi Elisiza Kwezomthetho lisombulula izingxabano ezimayelana nomhlaba ngokushesha, akanakho ukungabaza ukuthi lo Mthethosivivinywa uzovumela abantu ukuba bathole umhlaba ngokulingana futhi ube neqhaza ekwakheni isizwe nokubuyiswa kwesithunzi sabantu.